Milalao fihoarana fingotra - miverina ny kilalao mahazatra
Tononkalo sy fiovana hafa amin'ny fihodinanan'ny fingotra
Tononkalo sy karazana fitsambikinana misimisy kokoa ho an'ny fihodinan'ny fingotra
Gummitwist dia mahazatra teo an-tokotanin'ny sekoly, teny an-dalambe (raha tsy dia nisy ny fifamoivoizana) ary teo amin'ny terraska. Androany ny lalao dia mamerina ny saina sahaza azy.
Ny fitsipika fototry ny fihodinan'ny fingotra mahazatra
Satria ny fanodikodinan'ny fingotra dia tsy vitan'ny hoe mampiroborobo ny fahaizan'ny dexterité, fa manome antoka ihany koa ny fivezivezena. Ho an'ny fihodinana elastika dia mila tarika lava elastika lava (elastika trouser) fotsiny ianao, izay tokony ho telo metatra ny halavany.
Azonao atao ny milalao irery ny lalao (miaraka amin'ny seza roa), saingy tsara kokoa amin'ny mpilalao roa hafa. Tsy voafetra ny isa, eny an-dalana, raha betsaka ny mpandray anjara, dia ho lava kokoa ny fotoana fiandrasana mandra-pikatsoanao.
Voalohany, mpilalao roa mifanatrika ary manamafy ny fingotra manodidina ny kitrokeliny. Ny fahatelo izao dia afaka mitsambikina mifanaraka amin'ny lamina iray, mandra-pahatongany ho diso. Raha tafavoaka velona amin'ny feny izy dia sintonina kely ilay fingotra mba hitombo ny haavon'ny fahasahiranana. Raha manao hadisoana izy dia anjaran'ny zaza manaraka izany.
Fanapahana volo: ny lesoka
Tsy misy lalao raha tsy misy fitsipika. Ny lesoka amin'ny fihodinan'ny fingotra dia tokony hiadian-kevitra amin'ny mpilalao rehetra mialoha mba hahafantaran'ny tsirairay izay sy ny zavatra tsy avela. Amin'ny ankapobeny, ny fingotra dia tsy tokony hokasihina amin'ny fehikibo vita amin'ny fingotra, raha tsy hoe mila mitsambikina mivantana ilay mitsambikina. Na dia tsy tanterahina tsara aza ny filaharan'ny mitsambikina dia azo heverina ho fahadisoana izany. Ny fikorontanana sy ny fijanonana dia heverina ho fahadisoana ihany koa amin'ny familiana fingotra.
Misy karazana fitsambikinana tsy tambo isaina ao anaty volo vita amin'ny fingotra, ka ny iray amin'izy ireo ihany no voatanisa eto amin'ny antsipiriany. Ny andininy "Hau-Jerk-Donald-Duck-Mickey-Mouse-Rein-Raus" dia fanta-daza ary fanombohana tsara amin'ny traikefa an-tsokosoko. Ny teny rehetra ao amin'ity andininy etsy ambony ity dia fitsambikinana. Mazava ho azy, ny ankizy dia afaka mamorona ny variants mitsambikina ho an'ny fehikibo vita amin'ny fingotra ihany, saingy tsara ny manana làlan-kaleha iray farafaharatsiny.
Ao anatin'ity variant mitsambikina avy amin'ny kofehy vita amin'ny fingotra ity dia mijoro miaraka amin'ny tongony mifanitsy amin'ireo fehin-kibo mihetsiketsika sy mitsambikina ny jumper mba hananany ilay fingotra izay lavitra azy eo anelanelan'ny tongony mihitsy. Amin'ity tranga ity dia heverinay fa io no fingotra ankavia raha jerena avy any ambony. Rehefa voadona izy dia manao izay hitsambikinana ho an'ny ankavanana, fehikibo fingotra ankavanana - koa eo anelanelan'ny tongony io.
Mazava ho azy, tsy tokony hikasihany izy. Ao anatin'ity variant mitsambikina ity amin'ny fihodinan'ny fingotra, ny teny Donald dia mitsambikina mahitsy eo afovoany, mifanakaiky ny tongotra. Ao Duck dia mitsambikina tanteraka miankavanana izy izao ka miverina amin'ny toerana nanombohany. Mickey mamerina azy amin'ny toerany niaraka tamin'i Duck, Mouse dia mitovy amin'i Hau. Ny teny in dia mifanaraka amin'i Donald, mivoaka indray dia mifanitsy amin'ny toerana fanombohana.
Be mpitia ihany koa ireo lahatsoratra avy amin'ny fanapahana fanapahana toy ny: satrok'i Müller nodorana may nirehitra na “Niorina ny siansa” (hita ao amin'ny Internet ireo lahatsoratra roa). Ny karazana fitsambikinana miaraka amin'ny fehikibo vita amin'ny fingotra izay tsy voatonona etsy ambony dia mety: ny mametraka ny tongotra ankavia sy ankavanan'ny fingotra, izany hoe manisy fefy eo ambonin'ilay fingotra, na midina iray metatra fotsiny amin'ny iray amin'ireo fingotra, izany hoe ny tongotra iray dia mbola any ivelany, ny iray amin'ny fingotra.
Mazava ho azy, azonao atao koa ny mitsambikina amin'ny elastika amin'ny tongotra roa, miaraka amin'ny tongotrao, ny tongotrao amin'ny iray amin'ireo kofehy elastika. Izay mamorona dia tsy ho ela dia hanana repertoire iray manontolo amin'ny fiovana mitsambikina ho an'ny familiana fingotra. Ny sisa tsy hita dia ny masoandro lohataona - ary vonona ny hihodina ianao.
Pejy fandokoana kofehy mitsambikina fingotra | ankizy